"ICampos de Castilla", ubuciko bobuciko buka-Antonio Machado | Izincwadi Zamanje
Ukuhlaziywa kwe «Campos de Castilla»
"Campos de Castilla" Kungumsebenzi owaziwa kakhulu wembongi yaseSevillian ekhaliphile u-Antonio Machado futhi wakhishwa ngo-1912, yize kamuva wandiswa eminyakeni emihlanu kamuva, ngo-1917. Kulomsebenzi izithombe zingezangempela futhi zingezona izimpawu ezincwadini zangaphambilini zalokhu Umbhali namasimu asho okuningi ngomlobi uqobo, ngohlanga lwesintu jikelele nangomlando waseSpain.
Eqinisweni, i- ukubola kwezwe kuzwakala encazelweni yokuzindla yombhali yezindawo ezithile noma nobuntu babanye abantu. Izimfihlakalo zokuphila noma imizwa yenkolo ezinye izingqikithi encwadini ejulile lapho uMachado embula khona ngokuphelele umphefumulo wakhe ukuveza konke okumkhathazayo noma okumcasulayo ngendlela ecace bha.
Ukufa kothandekayo wakhe Leonor kuzwakala ezinkondlweni eziyisikhombisa ezakha le ncwadi. Ngaphezu kwalokho, okunye kanye nombono kubangela ama-puns amahle futhi ahlakaniphile amelwe ikakhulukazi "Emifanekisweni". "Izaga nezingoma" zisondele ngokomthetho kwifilosofi yaseMpumalanga ngokuya ngobufushane nangokuthatheka kwazo, kwesinye isikhathi okukhumbuza izinkondlo zaseJapan noma zaseChina.
Futhi encwadini kukhona ukuthandana okubanzi okubizwa ngokuthi "Izwe lase-Alvargonzález", yesimo sokulandisa lapho kukhonjiswa khona usizi lomuntu, endabeni lapho ukuvelela nokuhaha kungaqondi khona ubuzalwane.
Ekugcineni sizosho ukuthi ngaphezu kwemigwaqo, imifula nezilwandle yizinto ezimbili ezinkulu izimpawu lomsebenzi, ngokuba yimifula impilo nezilwandle okufana nokuthile okuphelele futhi okungenamkhawulo kulokho abanye abagxeki abakholelwe kubona isimo sikaNkulunkulu.
2 Ubhala kanjani u-Antonio Machado Campos de Castilla
3 Izinhlamvu zikaCampos de Castilla
4 Yini umbhali afuna ukuyiveza njengesiphetho?
5 Kungani kufanele ufunde iCampos de Castilla
Isimo somsebenzi waseCampos de Castilla senzeka eCastilla, ikakhulukazi esigodini, eVinuesa naseMuedra, ngaseCidones. Eqinisweni, kunamadolobha amaningana ashiwo, ikakhulukazi ngumfowethu omncane okunguye ohambele umhlaba futhi abuyele ekhaya futhi. Isikhathi esiqondile le ndaba eyenzeka ngaso asaziwa, kepha sisinikeza ingxenye yomlando lapho sihlala khona ngokususelwa ekuthumeleni, emasikweni nasempilweni yokulondoloza. Kuyo, udumo nodumo yimizwa emibili ebaluleke kakhulu echaza abantu.
Ngaphezu kwalokho, umbhali uphakamisa ukuthi izenzo zamadoda zingathonywa ukuphawula noma izingxoxo nabesifazane babo, yingakho kungabazeka ukuthi ngubani ngempela umqondo wokuqeda ubaba womndeni.
Kuwo wonke umlando, umcimbi owenzeke ngandlela thile uguqula abalingiswa emdlalweni, ubumbe indlela yabo yokuba yibo futhi uzivumelanise nalokho abakwenzile.
Ubhala kanjani u-Antonio Machado Campos de Castilla
ICampos de Castilla ibhalwe kumuntu wesithathu. Unombalisi okunguye oxoxa indaba ngaphandle kokunikeza umbono noma imizwa ngokwenzekayo, yize lapho lokho akubhalayo kubuyekezwa, uzwakalisa lokho akuzwayo.
Imisho mifushane futhi inamasiko kakhulu. Ngaphandle kwezincazelo, konke okunye ifuna ukusho okuningi ngamagama ambalwa. Lokhu kungenxa yokuthi kungumsebenzi evesini, ngakho-ke bekufanele kubuswe ngamamethrikhi ezothando.
Ekuqaleni, icebo lendaba lihlaba umxhwele futhi liyashesha, kepha umbhali ukwenze ukuze kufinyelele ngqo ekubulaweni ngoba, ukusuka lapho, wonke umsebenzi ugxile kulokho kubulala kanye nemiphumela esinayo kubalingiswa.
Ngokuqondene nomsebenzi, wehlukaniswe izigaba eziyi-10, ngasinye sinesihloko ngendlela esisebenza njengesandulela sokutshela okuzolandiswa kwesinye nesinye sazo.
Izinhlamvu zikaCampos de Castilla
Umsebenzi we U-Antonio Machado Kufushane impela, nokho, akuvimbi ukuthi kunezinhlamvu ezimbalwa eziphawulekile nokuthi kulula ukwazi, hhayi kuphela ezingeni lomzimba (into engachazi ngokweqile), kepha ngaphezulu ngaphakathi, ukwazi ukuthi yini ihambisa ngayinye.
Ngakho-ke, phakathi kwazo kukhona:
Akungabazeki ukuthi lo protagonist wengxenye yokuqala yomsebenzi, futhi nobaba wezinye izinhlamvu. Akusho ukuthi livela okokuqala kuphela, kodwa nokuthi liyavela nasengxenyeni yesibili, kodwa ngendlela engokomoya noma eyisipoki.
Ubuntu obunikezwa umbhali ku-Alvargonzález yilobo bokuthi indoda efuna ukwenza konke okusemandleni ukuze umndeni wayo uphile futhi kalisweli lutho. Kuyena, umndeni uyinto ebaluleke kakhulu. Ngaphezu kwalokho, sikhuluma ngomuntu othembekile futhi othandana naye uqobo.
Unkosikazi ka-Alvargonzález akanayo indima emele kakhulu eCampos de Catilla, kepha usezingeni lesibili. Ngaphezu kwalokho, njengoba indaba iqhubeka, yize ibonakala ngezikhathi ezahlukahlukene, iqiniso ukuthi umbhali uyayengeza ku-a ukudabuka ngokulahlekelwa ngumyeni wakhe owabulawa.
Vele, lokhu kungabonakala nangenye indlela, ngoba uma ngaphambi kokuthi sisho ukuthi u-Alvargonzález wayeyindoda eyanikela ngakho konke emndenini wayo, futhi yayisemathandweni, iqiniso lokuthi umkakhe ulahlekelwe naye lingahunyushwa ngokuthi ulahlekile injongo yakhe yokuphila, kumuntu amthande kakhulu futhi wamthanda kakhulu, ongazi ukuthi angaqhubeka kanjani ngaphandle kwakhe.
UJuan uyindodana endala, izibulo. Kodwa futhi omunye wababulali bakayise. Ngaphandle kothando lokhu amnike lona, ​​umbhali usevele umele umlingiswa ongenawo umbono omuhle ngaye. Ukhuluma ngaye emchaza ngobuso obunezihlahla nokuziphatha okuncane kakhulu.
Kuwo wonke umlando, lo mlingiswa uhlushwa isiphetho sakhe esinonya, ngandlela thile u-Antonio Machado amholele kuleso sisho esithi "noma ngubani okwenzayo, uyasikhokhela."
Uyindodana yesibili ka-Alvargonzález, futhi futhi ungomunye wababulali bakayise. Futhi, uMachado wethula umlingiswa "omubi" ongazwelani naye kepha osolisayo. Ngamehlo ayindida nokuziphatha okungabazekayo, inesiphetho esifanayo naleso esedlule.
UMiguel uyindodana yokugcina yomndeni. Kuze kube yileso sikhathi, ubengahlali nabo kepha, ngemuva kwengxoxo ngekusasa lakhe, njengoba ebengafuni ukuba yindela, uyashiya ekhaya. Uma ebuya, izinto ziyaqala ukusebenza.
Kulomsebenzi, futhi abafazi bezingane banokubaluleka okuthileKepha ziyizesekeli ezinobuntu obufanayo nobabayeni babo. Eqinisweni, umbhali akabaniki izwi elikhulu noma avote.
Yini umbhali afuna ukuyiveza njengesiphetho?
ICampos de Castilla akuyona nje umdlalo lapho kutshelwa khona ukubulala. Ikhuluma ngendaba isikhungo sayo esingukubulala, kepha futhi nokuthi kukhona ubulungiswa baphezulu, okungukuthi, uma othile enza isenzo esibi, kungekudala noma kamuva kuzoba nesijeziso sako.
Ngakho-ke, singasho ukuthi uCampos de Castilla uyisibonelo senkulumo ejwayelekile ethi «ngubani oyenzayo, uyayikhokha», lapho ngemuva kokubulala, ababulali uqobo lwabo bagcina bethatha imishanguzo yabo ngoba bengazuzi lokho ababekufuna ekuqaleni.
Kodwa-ke, uMachado akagxili kuphela kulolu daba, kodwa futhi ukhuluma nangezinye, ngendlela egubuzelwe kakhulu, efana "nokugula kothando" komama okuthi, lapho elahlekelwe ngumyeni wakhe, abe lusizi; noma umona nomona ezinganeni ezixhokonxa ukubulawa kukababa.
Ngisho ekugcineni, umbhali khuluma ngokuzisola ngabakwenzile.
Kungani kufanele ufunde iCampos de Castilla
ICampos de Castilla ibhuku elizama chaza ukuthi noma iluphi uhlobo lwesenzo, esihle noma esibi, lunemiphumela. Okugqame kakhulu ngokungangabazeki ukubulawa kukababa ezandleni zezingane zakhe, nokuthi "babulawa" kanjani ekugcineni "ubulungiswa baphezulu."
Kodwa-ke, akunakwa ukuthi indaba yendodana encane ishintsha kanjani. Ushiya ikhaya ngoba efuna ukulandela inhliziyo yakhe futhi ubaba wakhe unquma ukumnika ifa lakhe ukuze enze noma yini ayifunayo. Ngakho-ke, uyahamba ayobheka umhlaba abuye, hhayi ompofu, kepha ajabule futhi acebise ngokwesiko nenjabulo. Ngakho-ke, futhi lezo zenzo ezinhle, zinomvuzo wazo encwadini.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Ukuhlaziywa kwe «Campos de Castilla»
USharly josari kusho
Kubonakala kimi ukuthi kufanele ibe nokujula okuthe xaxa maqondana nokuhlaziywa kwaleli qoqo lezinkondlo elisuka ngokuphelele ebusosheni ukwenza indlela yeSizukulwane sika -98 ngolimi olulula nokubhekana nezinkinga ebusweni be-DECADENCE OF ESPAIN
Isifinyezo esifushane esithi "Umlando wezitebhisi" ngu-Antonio Buero Vallejo